ခုတလော ၀တ္ထုအသစ် ရေးဖို့ကြိုးစားပေမယ့် ထွက်မလာပါ။ ရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ တစ်ပုဒ်တော့ လောကအလှကို ပေးလိုက်ပါတယ်။ အခုတော့ စာဖတ်စရာတွေ ရှိလာပြန်တယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအတောအတွင်းမှာ အဟောင်းတချို့ကို ပြန်တင်ပေးပါမယ်။
မနှစ်က ဂျူလိုင်မှာ ထွက်ခဲ့တဲ့ သံလွင်အိပ်မက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ တတိယအနား ဆိုတဲ့ ၀တ္ထုတစ်ပုဒ်ကို ဘလော့ဂ်မှာ ပြန်တင်လိုက်ပါတယ်။ ဖတ်ဖူးသူများ နောက်တစ်ခေါက် ပြန်ဖတ်ပေါ့နော်။ မဖတ်ရသေးသူတွေ အတွက်တော့ အသစ်ပေါ့။
အဲသည် အပြိုင်မျဉ်းနှစ်ကြောင်းကို သူ ငေးစိုက် ကြည့်နေသည်မှာ အတော်ကြာပြီ။ လွန်ခဲ့သော တနာရီခန့်က ထိုမျဉ်းနှစ်ကြောင်းကြားတွင် တစုံတရာသည် ရုတ်တရက် လွင့်စင်ကြေမွ သွားခဲ့သည်။ ထိုတနာရီမတိုင်ကတော့ ထိုတစုံတရာသည် သက်ရှိအနေဖြင့် သူလိုငါလို အများအကြားတွင် လှုပ်ရှားသွားလာ နေထိုင်ခဲ့မည်။ အခုတော့..။
Posted by pandora at 1:22 AM
အဲဒီ စာလေး သိပ်ကြိုက်တယ် မ။
သံလွင်မှာ ပါကတည်းက ...
မနိုးမချင်းတော့ ဒါဟာ အိပ်မက်ပဲဖြစ်သည်။
အရမ်းကောင်းတဲ့ ဝတ္ထု တစ်ပုဒ်ပါ ။
အမပန်ရေ ဒီပို့စ်လေးက အတွေးတွေကိုပေးသလို လက်ရှိဘ၀လေးကိုထင်ဟပ်စေတယ်နော်။ တွေးလိုက်ဦးမယ်ဗျာ
Good...thax...But worry.. :)
ဘ၀ကြီးတခုလုံးထဲမှာ ထည့်သွင်း မျိုချထားရသည့် ဘ၀သေးသေးလေးတွေ များစွာရှိသည်။ ဒါတွေကို မျိုချဖို့အတွက် ၀ါသနာများ၊ အပန်းဖြေခရီးများ၊ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများ၊ မိသားစုဘ၀၊ နွေးထွေးသော ညစာ၊ အိပ်ရေးဝခြင်း၊ ဟိုငေးသည်ငေးအချိန်များ စတာတွေကို သူထွေးထုတ်ခဲ့ရသည်။
အနည်းဆုံးတော့ ခန္တီ ဘလိတ်ဓါးတွေကို မျိုမျိုချ
မနိုးမချင်းတော့ . . ဒါဟာ အိပ်မက်ပဲ ..
နိုးနိုးချင်း ဖတ်မိတယ်.. မြန်မြန်ထမှ
တော်ပါသေးရဲ့ နေ့ခင်း ဖတ်မိလိ်ု့
နေမကောင်းလို့လည်ရုံပဲ လည်တော့မယ် စာမဖတ်တော့ဘူးလို့ စဉ်းစားထားတာတောင် ပြီးတဲ့ အထိ ဖတ်ဖြစ်အောင် စွဲဆောင် သွားတယ်..။မျက်လုံးတွေပူနေလို့ သုံးခေါက်နားပြီး ဖတ်လိုက်ရတယ်..။
"" EXIT ""
အိပ်မက်ဆိုးပဲ။ ဒါမျိုး မမက်ပါရစေနဲ့..တကယ်လုပ်မိမှာစိုးလို့..:)
Approach လုပ်သွားတာလေးကို သဘောကျတယ်... Singapore MRT suicide cases တွေကို Hidden Background ထားပြီး ဘဝရဲ့မွန်းကျပ်နာကျင်မှုတွေကို မျဉ်းပြိုင်နှစ်ကြောင်းနဲ့ တင်ပြထားတာကောင်းပါတယ်..
Approach လုပ်သွားတာလေးကို သဘောကျတယ်..
Let me construct the triangle.
Two strait lines draw from initial point at North pole to meet Equator so that becomeacompleted triangle.
That two strait lines in parallel is called Meridian which intercept right angle to the base line (Equator). I say two right angles (90X2)with very large spherical triangle.
But it isaso small if you compare with celestial sphere like lines joining planets, stars.
မျိုချထားတာတွေများလွန်းရင် ထွက်ပေါက်ရှာသွားတတ်ကြလား။ ဒါဆို ထွေးထုတ်ဖို့နေရာတစ်နေရာရှာမှနော်.... ဘယ်သူမှသတိမထားမိတဲ့တစ်နေရာရာပေါ့......
အမပန်ရေ သံလွင်မှာကတည်းက ဒီပိုစ့်လေးကို ကြိုက်နေတာ။ တကယ်ကောင်းတယ်ကွာ။ ကိုယ်တောင်မောလာတယ်။ တကယ့်ကို ထိထိမိမိရှိတယ်။
A great novel. I hope he can speak out his inner mind when he wakes up :)
ဖတ်ဖူးပြီးသားပေမယ့် နောက်တခေါက် ထပ်ဖတ်သွားပါတယ်... အဲဒီ အိပ်မက်မျိုးတော့ မက်ရမှာ ကြောက်ပါတယ်...။